ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning]
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning]
1 ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 7th May 2010, 6:05 pm
ဘယ်မှာရေးရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာတင်လိုက်ပါတယ်။ Media ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်ပါတယ်။ သင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ အလုပ်ချိန်က တနင်္လာကနေ စနေ ထိ။
မနက် အိမ်က 8 ခွဲလောက်ထွက်ပြီး အိမ်ကို6နာရီလောက်မှ ရောက်တယ်လေ။ တစ်ခါတလေ 8နာရီမှရောက်တဲ့နေ့လည်း ရှိတယ်။ အင်တာနက်သုံးဖို့တောင် အချိန်သိပ်မရဘူး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 7th May 2010, 6:20 pm
ကို SilentHill ရေ...
Ebook တွေဖတ်ပါလား။ Forum ထဲမှာလဲရှိပါတယ်။ ဒီမှာ Link ပါ။
ပြီးတော့ post တွေတင်တဲ့အခါမှာ [You must be registered and logged in to see this link.] မှာရှိတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ အညီ တင်ပေးပါခင်ဗျာ။
3 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 7th May 2010, 8:37 pm
ကိုဇော်လင်း(youth) ကထုပ်တဲစာအုပ်ဖတ်ကြည်ပါလား။ တော်တော်အဆင်တောပြေတယ်။
4 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 7th May 2010, 9:18 pm
သ နား စ ရာ ကြီး ပါ လား နော် ...
5 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 7th May 2010, 9:25 pm
Media ပိုင်းဆိုတာ အများကြီးလေ။
ဘယ် media ပိုင်းကို ပြောတာလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှ ညွှန်လို့ရမှာပေါ့။ ဟုတ်ဝူးလား.
ဟိ။ သူက ကြွားသွားတော့ နာလည်း အလုပ်ရှုပ်ပုံကို နည်းနည်း ၀င်ပြောလိုက်ဦးမယ်။
ကျွန်တော်က မနက် အိမ်ကနေ ၆ ခွဲထွက်ပြီး ညဘက် အိမ်ကို ၁၁ နာရီမှပြန်ရောက်ပါတယ်။ (အိမ်မှာ အင်တာနက်မရရင်)
အိမ်မှာ အင်တာနက်ရတော့ မနက် ၆ ခွဲကနေ ညနေ ၆ ထိ ထွက်ရပါတယ်။
ညဘက် အိပ်မယ်ဆိုရင် မနက်ခင်း ၃ ခွဲလောကမှ အိပ်ရပါတယ်။ လူလည်း အရိုးဖြစ်နေပြီ။
6 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 7th May 2010, 9:47 pm
Oh OH ... there $ƴǩǾ again whom I need to have sympathy for.. Dun try so hard, $ƴǩǾ.
It seems YOU ARE POSSIBLE for getting tired.
7 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 7th May 2010, 10:39 pm
Oops! ငယ်တုန်း လေ့လာထားမှ တော်ကာကျမှာ။
ဒါတောင် အခုထိ ဘာမှသိပ်မတတ်သေးလို့ ၊ စိတ်ညစ်နေတာ။
hee hee, we reply & reply again the Off Topic to make this Thread Spamming.
8 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 8th May 2010, 6:11 pm
Movie Editing တို့၊ Effect ထည့်တာတို့ အဲလိုမျုိုးတွေကိုပြောတာပါ။
9 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 8th May 2010, 6:15 pm
ထက်နိုင် wrote: ကို SilentHill ရေ...
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကိုထက်နိုင်ပြောတဲ့နေရာကို သွားခဲ့ပါတယ်။ memory stick မပါလာလို့ နောက်ရက်မှ ဒေါင်းပါမယ်။ ကျေးဇူးပါ။
နောက်ပို့စ်တွေကိုလည်း စည်းကမ်းနဲ့အညီ တင်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 17th May 2010, 9:56 pm
video editing, effect တို့အတွက် Ulead Video Studio6မြန်မာလိုအသုံးပြုပုံစာအုပ်လေးပါ
11 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 19th May 2010, 3:27 pm
ကျနော် java script နဲ့ပတ်သတ်ပြီးလေ့လာချင်လို့ပါ
online Teaching လိုမျိုးရှိရင် လမ်းညွှန်ပေးကြပါနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
12 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 19th May 2010, 6:03 pm
13 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning] on 20th May 2010, 7:08 pm
အိမ်က 8 ခွဲလောက်ထွက်ပြီး အိမ်ကို6နာရီလောက်မှ ရောက်တယ်လေ။ တစ်ခါတလေ
8နာရီမှရောက်တဲ့နေ့လည်း ရှိတယ်။ အင်တာနက်သုံးဖို့တောင် အချိန်သိပ်မရဘူး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
14 Re: ကူညီကြပါ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ [Learning]